Kidnapping Navage Veldjee : Jiolahy telo voasambotra -
AccueilSongandinaKidnapping Navage Veldjee : Jiolahy telo voasambotra
Taorian’ny fanadihadiana lalina nataon’ny teo anivon’ny “cellule mixte d’enquête” etsy amin’ny toby Ratsimandrava Andrefanambohijanahary, dia jiolahy miisa telo isan’ny tompon’antoka tamin’ny kidnapping an’ilay karana Navage Veldjee no efa voasambotra. Araka ny loharanom-baovao avy eo anivon’ity sampandraharaha ity, dia tamin’ny alalan’ny fandrenesam-baovao ny amin’ny fisiana olona mizara vola mipetraka eny Besarety Antananarivo, izay nahiana mafy ho nisy hifandraisany tamin’ity raharaha ity no niaingan’ireo polisy sy zandary mpanao famotorana. Nanao fidinana ifotony teny amin’ny toerana voalaza ireo mpitandro filaminana ny 07 jona lasa teo, ary niroso avy hatrany tamin’ny fisavana trano.
Fitaovam-piadiana toa ny basy poleta “calibre 12” sy bala miisa telo niaraka tamin’ny “matraque électrique” sy “ruban adhésif” fanapenana ny vavan’ireo nalaina an-keriny no tra-tehaka nandritra izany. Tsy nahitana vola kosa anefa tao amin’io trano io. Nosamborina ary nentina nanaovana fanadihadiana tany amin’ny biraon’ny mpitandro filaminana avy hatrany ireo olona telo tao an-toerana. Tamin’ny alalan’izany no nahafantarana fa tafiditra ao anatina fikamban-jiolahy mpanao fanafihana mitam-piadiana mahery vaika izy ireo. Niaiky ihany koa ireto farany fa nandray vola , saingy tsy nolazain’izy ireo ny toerana nametrahana izany. Efa natolotra ny fampanoavana ny 11 jona lasa teo moa izy telolahy ireo, ary ndoboka am-ponja vonjimaika eny Antanimora avy hatrany ny roa. Nahazo fahafahana vonjimaika kosa ny iray tamin’izy ireo.
Olona 106 nalaina am-bavany
Araka ny tatitra avy eo anivon’ity sampan-draharaha miady amin’ny resaka fakana an-keriny ity ihany, dia kidnapping miisa sivy no efa noraisin’izy ireo an-tanana nanomboka ny volana aogositra 2017 nijoroan’izy ireo. Olona miisa 106 tamin’ireo tranga ireo no voasambotra sy natao fanadihadiana , ka ny 24 tamin’ireo noahiahiana ho nandray anjara mivantana sy ankolaka tamin’izany no natolotra ny fampanoavana. Rehefa nivoaka ny didy, dia ny 21 tamin’izy ireo no naiditra am-ponja vonjimaika ka isan’izany izy roalahy ireo. Nanamafy moa ireo mpitandro filaminana fa isan’ny maha-sarotra ity raharaha fakana an-keriny ity ny tsy fisian’ny fiaraha-miasa eo amin’izy ireo sy ny fianakavian’ireo nalaina an-keriny.
Taorian’ny fahazoan’i Madagasikara ilay vola mitentina 10,6 miliara dolara tamin’ny Conférence des Bailleurs, tany Paris, France, ny faran’ny herinandro teo, nanambara ny filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina, fa hatsangana afaka andro vitsivitsy ny rafitra mpanara-maso ireo famatsiana ...Tohiny